Hordhac: Chelsea Vs West Bromwich Albion: Blues Oo Doonaysa In Ay Ka Fogaato Rikoor Xun Oo Ay Dhigtay 7 Sano Ka Hor – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino Hordhac: Chelsea Vs West Bromwich Albion: Blues Oo Doonaysa In Ay Ka Fogaato Rikoor Xun Oo Ay Dhigtay 7 Sano Ka Hor
Hordhac: Chelsea Vs West Bromwich Albion: Blues Oo Doonaysa In Ay Ka Fogaato Rikoor Xun Oo Ay Dhigtay 7 Sano Ka Hor
Kooxda chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge ku soo dhawayn doonta kooxda West Bromwich Albion kulankii ugu dambeeyay ee todobaadka 27-aad ee premier league.
Kooxda difaacanaysa horyaalke ee Blues ayaa kulanka soo galaysa iyada oo laba arimood maskaxda ku haysa waliba si aad ah u doonaysa in ay saxdo.
Mida 1-aad ayaa ah in ay saxdo qaab ciyaareedkeedii labadii kulan ee ugu dambeeyay kuna soo laabato wadada guulaha kadib laba guuldaro oo xiriir ah.
Mida 2-aad ayaa ah in ay u baahantahay in ay ku soo laabato kaalinta 4-aad oo ay Tottenham kala baxdo markii ay ka badisay kooxda Arsenal.
Dhanka kale kooxda West Bromwich Albion ayaa u dagaalami doonta dhiigana u shubi doonta sidii ay uga soo kici lahayd kaalinta ugu hoosaysa horyaalka Premier League.
Kulanka: Chelsea Vs West Bromwich Albion
Wakhtiga: 11:00 Habeenimo
Chelsea ayaa guul gaartay seddexdii kulan ee ugu dambeysay ee Premier League ee ay ku wajahday West Bromwich Albion intii uu Antonio Conte hogaaminayay iyaga oo aan xitaa hal gool laga dhalin.
Blues ayaa dooneysa inay ka fogaato inay laba guuldaro oo xiriir ah oo premier league ah soo gaarto markii ugu horaysay tan iyo bishii November 2011, markaasoo ay guuldarro ka soo gaartay Arsenal iyo Liverpool.
Alan Pardew ayaa ku guuleystay garoonka Stamford Bridge isaga oo kala hogaaminaya laba kooxood kuwaas oo kala ah Newcastle iyo Crystal Palace ma jiro tababare ku guulaystay isaga oo 3 kooxood hogaaminaya.
Baggies ayaa badisay kaliya labo jeer 18-kii kulan ee ugu dambeeyay Premier League ee ay booqdeen London 6 kulan bar-baro ayay gashay 10 kulana waa laga badiyay labada guuloodba Crystal Palace ayay ka gaartay.